အရင်ကချစ်သူဟောင်း ကို သူမအနား မှာရှိ ခဲ့စဉ်တုန်းက တန်ဖိုးမထားဂရုမစိုက်မိလို့ နောင်တတွေ များစွားနဲ့လွမ်းဆွတ်နေကြောင်း ဆိုလာတဲ့ သံစဉ်မောင် – Let Pan Daily
Let Pan | July 20, 2021 | Celebrity | No Comments
ပရိသတ်ကြီးရေ မနေ့ညက သတင်းထောက် မရတ်ကျော်သူရဲ့ အချစ်ရေးပြသနာကို live လွှင့်ရှင်း တဲ့ အကြောင်းဟာ အွန်လိုင်းပေါ်တွင် ဟိုးလေးတကျော် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်နော်။ ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာမိန်းကလေးအများစုက သူတို့ရဲ့ ခံစားချက်တွေကို ဖွင့်ဟ ရေးသားလာကြ ပါတယ်နော်။
သရုပ်ဆောင် သံစဉ်မောင်ကလည်း လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်တွေက သူမအပေါ်ကောင်းခဲ့တဲ့ ရည်းစားဟောင်းကို သတိရ နေကြောင်း ရေးသားလာခဲ့ပါတယ်နော်။ ရည်းစားဟောင်းနာမည်ကိုတော့ တိတိကျကျပြောထားခြင်း မရှိဘဲ အချိန်တွေ လွန်သွားမှ နောင်တရနေကြောင်း ရေးထားပါတယ်နော်။ ” သတိရလားမေးရင် ကိုယ့်အပေါ်ဘဝမှာ အရမ်းကောင်းပေးခဲ့သူ ဘယ်တော့မှ မမေ့ပါဘူး။ သူ့လိုလူမျိုး နောက်တစ်ယောက်လည်း ရှိလာမှာ မဟုတ်တော့ဘူး။အနားမှာရှိတုန်းက တန်ဖိုးနားမလည်ခဲ့ဘူး အခုလည်း တိုက်ဆိုင်မှုရှိရင် သတိရပါတယ်။ Mg အပေါ် အစစအရာရာစေတနာ မေတ္တာထားပေးပြီး ချစ်ပေး ခဲ့တာ ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်။ “
” တမ်းတရမှာပေါ့ ဘဝမှာ Good Memories တွေ အများကြီးရှိဖူးခဲ့သူမို့ သတိရတဲ့ အကြောင်းအရင်း ဆိုတာကလည်း oversea ခရီးတွေ အတူသွား ဘဝမှာ အမှတ်တရအများကြီးရှိခဲ့ဖူးသူမို့ အခုလည်းရmemories တွေ ပြန်တက်လာလို့ပါ အမေတောင် ပြောခဲ့ဖူးတယ် နင်ဒီလိုလူမျိုး ထမင်းထုပ်သိုးတောင်ရှာမတွေ့ဘူးတဲ့ တကယ်လည်း မတွေ့တော့ပါဘူး လူကောင်းတစ်ယောက်ကိုတော့ အမြဲရင်ထဲရှိနေမှာပါ” လို့ ရေးထားတာကို ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ….
Credit ; CeleLucky
ပရိသတ္ႀကီးေရ မေန႔ညက သတင္းေထာက္ မရတ္ေက်ာ္သူရဲ႕ အခ်စ္ေရးျပသနာကို live လႊင့္ရွင္း တဲ့ အေၾကာင္းဟာ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ ဟိုးေလးတေက်ာ္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္ေနာ္။ ဒီအေၾကာင္းအရာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဆိုရွယ္မီဒီယာမွာမိန္းကေလးအမ်ားစုက သူတို႔ရဲ႕ ခံစားခ်က္ေတြကို ဖြင့္ဟ ေရးသားလာၾက ပါတယ္ေနာ္။
သ႐ုပ္ေဆာင္ သံစဥ္ေမာင္ကလည္း လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေတြက သူမအေပၚေကာင္းခဲ့တဲ့ ရည္းစားေဟာင္းကို သတိရ ေနေၾကာင္း ေရးသားလာခဲ့ပါတယ္ေနာ္။ ရည္းစားေဟာင္းနာမည္ကိုေတာ့ တိတိက်က်ေျပာထားျခင္း မရွိဘဲ အခ်ိန္ေတြ လြန္သြားမွ ေနာင္တရေနေၾကာင္း ေရးထားပါတယ္ေနာ္။ ” သတိရလားေမးရင္ ကိုယ့္အေပၚဘဝမွာ အရမ္းေကာင္းေပးခဲ့သူ ဘယ္ေတာ့မွ မေမ့ပါဘူး။ သူ႔လိုလူမ်ိဳး ေနာက္တစ္ေယာက္လည္း ရွိလာမွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။အနားမွာရွိတုန္းက တန္ဖိုးနားမလည္ခဲ့ဘူး အခုလည္း တိုက္ဆိုင္မႈရွိရင္ သတိရပါတယ္။ Mg အေပၚ အစစအရာရာေစတနာ ေမတၱာထားေပးၿပီး ခ်စ္ေပး ခဲ့တာ ေက်းဇူးအမ်ားႀကီး တင္ပါတယ္။ “
” တမ္းတရမွာေပါ့ ဘဝမွာ Good Memories ေတြ အမ်ားႀကီးရွိဖူးခဲ့သူမို႔ သတိရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္း ဆိုတာကလည္း oversea ခရီးေတြ အတူသြား ဘဝမွာ အမွတ္တရအမ်ားႀကီးရွိခဲ့ဖူးသူမို႔ အခုလည္းရmemories ေတြ ျပန္တက္လာလို႔ပါ အေမေတာင္ ေျပာခဲ့ဖူးတယ္ နင္ဒီလိုလူမ်ိဳး ထမင္းထုပ္သိုးေတာင္ရွာမေတြ႕ဘူးတဲ့ တကယ္လည္း မေတြ႕ေတာ့ပါဘူး လူေကာင္းတစ္ေယာက္ကိုေတာ့ အၿမဲရင္ထဲရွိေနမွာပါ” လို႔ ေရးထားတာကို ေဝမွ်ေပးလိုက္ပါတယ္ ပရိသတ္ႀကီးေရ….
တိုက်ပွဲမှာ ကျဆုံး သွားတဲ့ အာဇာနည် သူရဲကောင်းတွေ ရဲ့ အိမ်သို့ သွားရောက် လှူဒါန်းရင်း ဝမ်းနည်း စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ မေ…..
ပြည်သူတွေ နဲ့ အတူ နိုင်သလောက်ဝန်ကို မျှထမ်းပေးနေကြတဲ့ ဘယ်သူ့ကိုမဆို နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပေးကြဖို့ တိုက်တွန်းလာတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု
ညှို့အား ပြင်းတဲ့ ကိုယ်လုံး အလှတရားတွေကို ရိုက်ကူးထားတဲ့ အကြမ်းစားပုံရိပ်လေးတွေကို ထုတ်ပြ လိုက်တဲ့ ပက်ထရစ်ရှာ